VPSA agụụ Oxygen generator - China Hangzhou poli Air Nkewa Equipment
Arụ ọrụ ụkpụrụ nke VPSA mgbali Ngabiga adsorption oxygen generator 1. The isi mmiri na ikuku bụ nitrogen na oxygen. Nitrogen na oxygen na ikuku dị iche iche adsorption arụmọrụ on zeolite (ZMS) at ihere okpomọkụ (oxygen nwere ike etinye obi gị dum site na nitrogen). Nitrogen na zeolite molekụla myọ adsorption ike dị mma karịa oxygen (nitrogen ion na molekụla myọ n'elu ike ike), mgbe ikuku na a ala na a zeolite molekụla myọ adsorbent adsorptio ...
Arụ ọrụ ụkpụrụ nke VPSA mgbali Ngabiga adsorption oxygen generator
1. The isi mmiri na ikuku bụ nitrogen na oxygen. Nitrogen na oxygen na ikuku dị iche iche adsorption arụmọrụ on zeolite (ZMS) at ihere okpomọkụ (oxygen nwere ike etinye obi gị dum site na nitrogen). Nitrogen na zeolite molekụla myọ adsorption ike dị mma karịa oxygen (nitrogen ion na molekụla myọ n'elu ike ike), mgbe ikuku na a ala na a zeolite molekụla myọ adsorbent adsorption bed, nitrogen site molekụla myọ adsorption, obere oxygen site adsorption, ịta na ịsọ gas na-adọ adsorption bed, na oxygen na nitrogen nkewa maka oxygen. Mgbe molekụla myọ adsorbs nitrogen na saturation, ikuku na-kwụsịrị na mgbali nke adsorption bed na-ebelata. The nitrogen etinye obi gị dum site na molekụla myọ na-atụle ihe ndị molekụla myọ na-regenerated ike reused. The oxygen ike-emepụta nọgidere site ịmafe n'etiti abụọ ma ọ bụ karịa adsorption akwa.
The esi n'ókè nke oxygen na nitrogen dị nso, na abụọ ndị siri ike ikewa. Ya mere, nsogbu Ngabiga adsorption oxygen na-eme ngwaọrụ nwere ike naanị nweta 90-95% oxygen (na polar ọjọọ ịta nke oxygen bụ 95,6%, na ndị ọzọ bụ argon). Jiri ya tụnyere ihe cryogenic ikuku nkewa unit, nke ikpeazụ nwere ike mepụta karịa 99,5% oxygen ịta.
1. The adsorption bed nke mgbali Ngabiga adsorption ikuku nkewa oxygen osisi ga-ebu abụọ ọrụ nzọụkwụ; Adsorption na mkpebi. Iji nweta ngwaahịa gas nọgidere, karịrị abụọ adsorption akwa na-na-arụnyere na oxygen-eme ngwá, na ụfọdụ dị mkpa inyeaka nzọụkwụ na-si n'ọnọdụ nke oriri ike ma kwụsie ike. Onye ọ bụla adsorption bed n'ozuzu nwere na-aga site ndị a dị ka adsorption, decompression, ịza ma ọ bụ decompression imu, flushing nnọchi na ọbụna mgbali agbam ume, na ugboro ugboro arụmọrụ oge. N'otu oge ahụ, onye ọ bụla adsorption bed bụ na dị iche iche ọrụ nzọụkwụ. N'okpuru nke PLC, ọrụ nke ọtụtụ adsorption akwa ike-achikota na obiab na ndị bara uru, nke mere na nsogbu Ngabiga adsorption ngwaọrụ nwere ike na-agba ọsọ were were na inweta ngwaahịa gas nọgidere. N'ihi na n'ezie nkewa usoro, ndị ọzọ Chọpụta mmiri na ikuku ga-atụle. The adsorption ike nke carbon dioxide na mmiri na-emebu adsorbent bụ n'ozuzu nnọọ ukwuu karịa nke nitrogen na oxygen, nke ga-ewepụ site na ejuputa adsorption bed na nke kwesịrị ekwesị adsorbent (ma ọ bụ site na oxygen-eme adsorbent onwe ya).
The ọnụ ọgụgụ nke adsorption elu chọrọ maka oxygen mmepụta ngwaọrụ na-adabere na ọnụ ọgụgụ nke oxygen mmepụta, adsorbent arụmọrụ na usoro imewe. The ọrụ kwụsiri ike nke multi-ulo-elu ọrụ dịtụ mma, ma ngwá ego bụ dịtụ elu. The ugbu a na-emekarị bụ iji ukwuu oru oma oxygen sorbent iwelata nọmba nke adsorption ụlọ nche na iji obere ọrụ oge iji melite arụmọrụ nke unit na ịzọpụta dị ka ukwuu ego dị ka o kwere.
Nka na ụzụ e ji mara
1. Simple akụrụngwa usoro
2. The ọnụ ọgụgụ nke oxygen mmepụta bụ n'okpuru 10000m3 / h, na ike oriri dị ala na ego bụ nta;
3. The ego nke obodo engineering bụ obere, na echichi oge nke ngwaọrụ bụ na mkpumkpu karịa nke cryogenic ngwaọrụ ahụ;
4. Low ngwá ọrụ na mmezi-akwụ ụgwọ;
5. The ngwaọrụ nwere a elu ogo akpaaka na-arụ ọrụ, adaba na ngwa ngwa na-emeghe ma na-akwụsị, na a ole na ole nke rụọ;
6. The ngwaọrụ nwere ike ime ihe ike na elu nchekwa;
7. Simple ọrụ, na isi akụkụ niile si mba a ma ama na-emepụta;
8. Dị oxygen molekụla sieves na elu arụmọrụ na ogologo ọrụ ndụ;
9. Strong arụmọrụ mgbanwe (elu ibu akara na ngwa ngwa akakabarede ọsọ).
2. Oxygen ọcha: 90-94% ma ọ bụ ukwuu, nke nwere ike gbanwere n'ime 30-95% nso dị ka onye ọrụ chọrọ.
3. Ike oriri nke oxygen mmepụta: mgbe oxygen adị ọcha na-90%, nke ike oriri converted n'ime ọcha oxygen bụ 0.32-0.37kwh / Nm3
4. Oxygen mgbali: ọ dịghị ihe karịrị 20kpa (nwere ike pressurized)
5. Power: ukwuu karịa ma ọ bụ hà 95%
Kọmpat Medical PSA Oxygen Generator
Etisasịwo Oxygen Generator
Etisasịwo Oxygen Nano afụ Generator
Oxygen Generator N'ihi sịlịnda
Oxygen Generator N'ihi Fish ọrụ ugbo
Oxygen nwụrụ Generator
N'ezinụlọ Oxygen Generator
Zeolite molekụla myọ Oxygen Generator